Ukukhishwa nokusizwa kwe-Ultrasonically kusiza ukukhiqizwa kwamafutha omnqumo ayizintombi asebenza kahle.
Inqubo yokuqina kwenqubo ye-ultrasonic iholela ekukhiqizeni okuphezulu kwe-EVOO, ikhwalithi ephezulu yokudla okunempilo nokuxubha okufishane.
I-Sonication yandisa okuqukethwe kwe-antioxidant ne-polyphenol emafutheni omnqumo e-virgin.
I-Malaxation, isinyathelo esiyisisekelo senqubo yokukhipha uwoyela womnqumo, ingathuthukiswa kakhulu yi-sonication. Ukusebenza kwe-malaxation kuncike kuzimpawu ze-rheological zokunamathisela komnqumo kanye nemingcele yenqubo yokuxuba, njengesikhathi nokushisa. Lezi zinto zithonya kakhulu umkhiqizo nekhwalithi yamafutha omnqumo ayintombi kakhulu.
Lapho kusetshenziswa amagagasi anamandla e-ultrasound enamathisweni womnqumo, kwenzeka i-cavitation. I-Cavitation ukwakheka, ukukhula nokufakwa kwamandla kwamabhamuza wegesi ngesikhathi sokushintshana kwemijikelezo yengcindezi. I-Ultrasonic cavitation yephula izakhiwo zamaseli ukuze izinhlanganisela ezincibilikayo zikhishwe ezicutshini zezitshalo zomnqumo nokudluliswa kwesisindo kuthuthukiswe. Ngakho-ke, isilinganiso sokukhishwa nesivuno sithuthukiswa kakhulu yi-ultrasonication. Amafutha avela kuma-pastes omnqumo abonisiwe abonisa ukufutheka okuphansi nokuqukethwe okuphezulu kwama-tocopherols, ama-chlorophylls nama-carotenoids, nawo.
I-Sonication iyinhlangano yobuciko bokudla okungeyona ejwayelekile yokudla okuvumela ukukhulula amafutha namakhemikhali asebenzayo (isib. Ama-antioxidants, phenolics, amavithamini) avela emnqumweni womnqumo. Inqubo eqhubekayo ye-inline, lapho umquba womnqumo udlula khona indawo ye-ultrasound cavitation, ivumela ukusebenza ngendlela efanayo. I-Sonication inenzuzo kakhulu ekushiseni kwe-process, futhi: Ukwelashwa kwe-ultrasonic kunikeza ukufudumala okusheshayo futhi kunciphise isikhathi sokushisa ngaphambi kokushisa komnqumo kakhulu, emva kwalokho izinga lokushisa lokushisa lingagcinwa kalula ekushiseni okuhle kakhulu (isib. 28-30ºC) .
Izinzuzo ze-Ultrasonic Olive Oil Extraction:
ukunambitheka okunephunga nokumnandi
okuqukethwe okuphakeme kwe-antioxidant
isikhathi eside sokuphila
Isikimu somugqa wokukhipha uwoyela womnqumo: A. isigaba sokuhlanza; B. crusher; C. futha umgodi; D. Umshini wase-US; Isigaba se-6-malaxer; F. i-centrifuge enezingqimba; Ama-centrifuges amile mpo.
(umbhali nokukopisha: M. Servili et al. 2019; akukho ukuphulwa kwe-copyright okuhloselwe.)
I-UIP4000hdT, iprosesa enamandla we-4kW ye-ext ra virgin olive oil malaxation kanye nesizinda
Isikhombi se-Ultrasonic UIP4000hT se-malaxation eqhubekayo nokukhishwa kwamafutha omnqumo e-virgin. Le vidiyo ikhombisa iprosesa le-Hielscher Ultrasonics UIPEVO / UIP4000hdT yokuxuba nokukhishwa kwamafutha omnqumo e-virgin (EVOO). Ukuchithwa kwe-Ultrasonic nokukhishwa kuyindlela efakazelwe yokwengeza isivuno esengeziwe samafutha omnqumo, ukwenza ngcono ikhwalithi ye-EVOO nokusheshisa isikhathi sokucubungula.
Isikhombi se-Ultrasonic UIP4000hdT ye-malaxation yezimboni kanye nokukhishwa kwamafutha omnqumo e-virgin
Ucwaningo lwezocwaningo olusebenzisa i-Hielscher I-UIP4000hdT kwenziwa nguProfesa Servili kanye nosebenza nabo eNyuvesi yasePerugia, e-Italy. Lezo zifundo zibonisa ukuthi:
Isistimu ye-Ultrasound isetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-VOO yezimboni ezimbili zamathani / h.
Ukunyuka okuphezulu kwamafutha okutholakala kwamafutha kwakutholakala kuminqumo ngesikhathi sokukhula okuvuthwe.
I-Ultrasound ithonya kahle okuqukethwe kwe-phenolic kwe-VOO.
Izinguquko ezibonakalayo ezibonakalayo, ukwanda komkhiqizo wesivuno (22,7%), okuqukethwe okwenziwe ngcono kwe-phenol (10.1%) kuboniswe e-US-VOO uma kuqhathaniswa namafutha okulawula aphethwe nenqubo yendabuko ngesikhathi sokukhula kokuqala.
Izisetshenziswa ze-Industrial Ultrasonic Extraction
Hielscher ultrasonics inikeza extractors ultrasonic kanye ultrasonic ukudla processing izinhlelo zivumelaniswe ukuze izinqubo zakho ezidingekayo. Sibheka izinhlelo zethu ze-sonication ezichazwe kumakhasimende ezifana nomthamo / ukudlula, ama-oliva (izinto ezibonakalayo), uhlobo lwe-oli kanye nekhwalithi, isikhala, nokuphindaphinda emifudlana yokukhiqiza ekhona. Ngokupompa umquba womnqumo ngokusebenzisa ikamelo le-reactor ultrasonic, amagagasi e-ultrasonic asetshenziselwa ngokufanayo ngokunquma komnqumo ukuze kutholakale izinga elihle kakhulu lomkhiqizo.
Enye yezinzuzo ezinkulu zezinhlelo ze-sonication zika-Hielscher ukulawula okugcwele kuzo zonke izinqubo zezinqubo. Ukushisa kwe-Sonication, izinga lokushisa nokucindezela kungalawulwa ngokuphelele ukuze inqubo ye-sonication ikwazi ukulungiswa kahle ngokuqondene nokukhiqiza nezindinganiso zekhwalithi.
Ibanga lezimboni zezinhlelo zethu ze-ultrasonic livumela ukuhlinzwa kwe-24/7 nokucubungula kwama-hazzle-free.
I-Sonication ithuthukisa ukukhipha kanye nokushaywa indiva ngamafutha omnqumo.
Izinzuzo zamaSystems Ultrasonic Extraction Systems:
evumelana nezidingo zamakhasimende
umhlangano olula & ukuhlanza
ukuqina & ibanga lezimboni (24/7)
izindleko zokugcina ezithintekayo eziphansi
izidingo zesikhala esincane
Amafutha Omnqumo Ophuculwe Ngokudla
Ukusebenzisa amagagasi e-ultrasound ngesikhathi se-maceration / i-malaxation isinyathelo sokuthuthukisa inani lokudla okunomsoco wamafutha omnqumo ngokulifakela kuma-phenolic amakhemikhali namavithamini avela emaqabunga omnqumo. Ngokukhipha ama-phenolic amakhemikhali afana ne-α-tocopherol ne-oleuropein emaqabunga omnqumo futhi ayengeze emafutheni omnqumo, izinga lokudla okunomsoco wamafutha omnqumo lingathuthukiswa.
Amafutha omnqumo amafutha
Amakhambi nezinongo ezifana ne-basil, i-sage, i-rosemary, i-garlic, i-lemon ikhasi, i-pepper, i-ginger, i-rosemary sprigs, njll ingasetshenziselwa ukunika amafutha omnqumo. I-extraction effect imiphumela ye-sonication isiza ukukhulula ukunambitheka kwe-herbal / spice substrate ephelele kakhulu futhi esheshayo. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic isizinda!
Izinhlelo zethu ze-ultrasonic zinezindlela ezihlukahlukene kakhulu futhi zingasetshenziswa ezinyathelweni eziningana zenqubo yakho. Uma ufuna ukucubungula amafutha omnqumo wakho, ungasebenzisa uhlelo lwakho lwe-ultrasonic ukudala ama-emulsions amahle, isib. Ukwakhiwa kwamafutha omnqumo ama-vinagrettes, ukugqoka noma ama-sauces.
I-UIP4000hdT – i-4kW enamandla i-ultrasonicator ekucutshungweni kwe-inline of olive olive olive
U-Bejaoui, u-Mohamed Aymen; UBeltran, uGabriel; Aguilera; UJiménez, u-Antonio (2016): Ukuhlala okuqhubekayo komnqumo wamanzi ngama-high power ultrasounds: Izindlela zokuphendula ngezansi ukubikezela izinga lokushisa kanye nomphumela walo ekukhiqizeni amafutha kanye nezici ze-olive oil virgin. LWT – Isayensi Yezokudla Nezobuchwepheshe 69, 2016. 175-184.
UJiménez, u-Antonio; UBeltrán, uGabriel; Uceda, M. (2007): Ukuphakama okukhulu kwe-ultrasound ekunakekelweni komnqumo. Imiphumela ekukhiqizeni inqubo kanye nemikhiqizo yamafutha omnqumo. Ultrasonics Sonochemistry 14 (6), 2007. 725-31.
Okuningi mayelana namafutha omnqumo
Amafutha omnqumo ahlanganisa kakhulu ama-triacylglycerol futhi anamanani amancane amafutha acids (ama-FFAs), i-glycerol, i-phosphatides, i-pigments, ama-flavor compounds, ama-sterols, kanye nezinhlayiyana ezincane zomuthi womnqumo. I-Oleic Acid iyinhlangano ye-omega-9 fatty monounsaturated enama-55 kuya ku-83% amafutha amaningi kakhulu ama-acids amafutha omnqumo. Uma amafutha omnqumo enziwe ngezithelo eziphansi ze-oliva yomnqumo noma engakhishwa ngokucophelela, ama-triacylglycerol adilizwa ngenxa ye-hydrolysis / lipolysis. Ngendlela yokusabela kwe-hydrolytic / lipolytic, i-triacylglycerol ephezulu yokudla okunomsoco iphenduka amafutha e-acids mahhala. I-fatty acidity yamahhala iyinani elibaluleke kunawo wonke izinga lamafutha omnqumo.
Okuqukethwe okuphezulu kwama-acids mononsaturated nama-antioxidants ngamafutha omnqumo ephakeme (okungeziwe) amafutha omnqumo anganciphisa ingozi yezifo zenhliziyo nomdlavuza. Ngaphezu kwalokho, imiphumela yaso elwa nokuvuvukala ingabangela ukugula okufana nesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, i-arthritis, nesifo se-asthma.
Inani lomsoco wamafutha omnqumo (per 100g / 3.5 oz / 103mL)
Amandla 3.701 kJ (885 kcal)
Ama-carbohydrate 0 g
Amafutha 100 g
igcwele 14 g
amafutha omega-3 ama-0.8 g
amafutha omega-6 9.8 g
amaprotheni 0 g
i-vitamin E 14 mg
i-vitamin K 62 μg
Ngaphandle komsoco walo, amafutha omnqumo iyisithako esiyigugu kakhulu sokunakekelwa kwesikhumba kanye nemikhiqizo yezimonyo. Ngenxa yama-emollients acebile, amafutha omnqumo iyisithako esithandwayo esiphuthumayo esikhwameni sekhanda kanye nama-creams, okuxubile umzimba nezikhwama zezinwele. Ama-homogenizers e-Ultrasonic avame ukusetshenziswa ekuqulunqweni nasekuhlanganiseni inqubo yokunakekelwa kwesikhumba nemikhiqizo yezimonyo. Ama-ultrasonic shear amabutho enza ama-emulsions we-fine size nama-dispersions. Ama-ultrasonic encapsulation amafomu ama-liposomes njengophathi wezithako ezisebenzayo. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusetshenziswa kwabaxube be-ultrasonic baseHielscher ekunakekeleni isikhumba kanye nembonini yezimonyo!